We Fight We Win. -- " More than Media ": အပြတ်အသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဦးစောမောင်ရဲ့ By my promise....ဟဲဟဲဟဲ.... who ever win.....ဟဲဟဲဟဲ။
အပြတ်အသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဦးစောမောင်ရဲ့ By my promise....ဟဲဟဲဟဲ.... who ever win.....ဟဲဟဲဟဲ။
Actually U Saw Mg want to give power to NLD and others against him. Finally he becomeapsychiatric patient and passed away.
U Saw Mg keeps his promise with his life!
actually,U Nay win afraid army .Thats why whenever he goes to oversea,he took general Kyaw Htin,not to take power when he was away from country.
ဦးနေ၀င်းအနေနှင့် ၁၉၅၈ အိမ်စောင့်အစိုးရ အဖြစ်နှင့် ၂နှစ် သူတာဝန်ယူ ခဲ့စဉ်က အာဏာ အရသာသိသွား သဖြင့် ၁၉၆၂-ခုနှစ် တွင် ပြန်မပေးတော့ပါ။
ထို့ကြောင့်သူသည် စစ်တပ်လက်ထဲတွင် အာဏာကိုကြာရှည်စွာ မထားလိုပါ.He know that if he give power to army long time,he will get danger.Thats why he told Saw Mg that ur duty is to do the election.When its finish,u r over.i will takecare that.Saw Mg want to prove that he is loyalty to his master U Nay Win.so,he told to public that army will go back to barrack after election.
ကြားသိရသော သတင်းအရ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဦးနေ၀င်းသည် အနိုင်ရ NLD ခေါင်းဆောင်ကို ခေါ်တွေ့ပြီး သူတို့ကိုမည်သို့ သဘောထား ပါသလဲ ဟုမေးသော အခါ NLD ခေါင်းဆောင်က သူ့သဘောနှင့် သူဆုံးဖြတ်၍ မရ အများဆန္ဒ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ပြောခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ ထို့နောက် NLD ကဦးနေ၀င်းကို ခုံရုံးတင်ရန်ပြုမူကြောင်း သိရှိရသည်။
ဦးနေ၀င်း အနေနှင့် ရွေးစရာလမ်းမရှိ။ ဒုတိယအကြိမ်သူ့ထွက်ပေါက် ပိတ်ခံရပြန်သည်။
အာဏာလွှဲပေးလျှင် NLD ကသူ့လံခြုံရေးကို အာမမခံ ကြိုးစင်တက်ရမည်ဖြစ်သောကြောင်မလွှဲတော့ပါ
General Saw Maung said that election and the result is not his business. Whose business is that? He was the head of government at that time. I am confuse.
I think he honestly inform the people that he is onlyapuppet of Than Shwe and Maung Aye.